Sei Kuwedzera Email Kero kune LinkedIn | Martech Zone
Chishanu, Mbudzi 30, 2012 Svondo, Ndira 15, 2017 Douglas Karr
LinkedIn yakachinja chikamu cheAdhion Connection uye, mumaonero angu, yakaita mbeveve kufamba kwekuviga nzira yekuwedzera kusangana neemail kero. Handina chokwadi chekuti vakaita izvi asi ikozvino yave nhanho nhanho maitiro pachinzvimbo chevaviri matanho aimbo tora. Iyi ingango iri peji randinoshanyira zvakanyanya muLinkedIn pandinodzoka kubva kuhurukuro kana misangano. Ini ndinoenda kuburikidza nemabhizinesi emakadhi evaya vanhu andakaunganidza uye ndinosangana navo.
Mune iyo nyowani mushandisi interface, kuwedzera kubatana neemail kero, heano matanho anotevera:
Click Wedzera Kubatana pamusoro kurudyi mushure mekupinda muInternet.
Baya Chero Email icon kurudyi ruoko.
pasi Dzimwe nzira dzekubatanidza, chengeta Koka neimwe email.
Nyora email yako kero mukati uye tinya Tumira Kukoka.
Tags: wedzera kubatanaeLinkedIn
Dec 1, 2012 pa 11: 39 AM
Wadii kungovatsvaga nemazita uye tinya batanidza?
Zvita 1, 2012 na1: 18 PM
Imwe panguva? Hapana nzira! Izvi zvinonditendera kuti ndivawedzere vese kamwechete.
Dec 2, 2012 pa 11: 57 AM
Hongu, iyi ndeimwe yenzvimbo idzo iwe neni tichagara tisingabvumirani pane. Ini handisi kuwedzera vanhu kuLinkedIn kunze kwekunge ndanyatso "kubatana" navo. Hausi mutambo wevazhinji kuti uone kuwanda kwandinogona kuwana
Pandinoenda kuchiitiko NDINOGONA kudzoka ndowedzera vanhu vashanu sekubatana. Vamwe vese vanopinda muSalesForce kungave seMQL kana SQLs.
Zvita 2, 2012 na12: 22 PM
Kana mumwe munhu akanditambidza kadhi rake rebhizinesi kana akabatana neni kuburikidza saiti kana neemail, isu takabatana. Ini handishatise hukama ihwohwo - asi mukutsvaga zviwanikwa zviri kuuya zvinobatsira dzimwe nguva. Ini handina basa nenhamba yekubatana, ini ndine hanya nekusvika kwenetiweki yangu. Uye zvinoshanda!